Evercontact: Gadziridza yako Info info neInbound Email Masiginecha | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 21, 2014 Chipiri, January 6, 2015 Douglas Karr
Inenge hafu yeawa yapfuura, mumwe munhu wePR akandisheedza kuti nditange hurukuro yepamhepo… ndakadaira runhare ndokuti, "Hesi Rebecca - ndagadzirira kuenda!" uye akashamisika kuti ndaiziva aifona. Chikonzero nei ndichiziva ndechekuti Rebecca akange andibata nguva shoma kuti ndiratidze chiitiko ichi uye ruzivo rwake rwekufonerwa rwakangoerekana rwawedzerwa kune vandinosangana navo paGoogle, uye vakawiriraniswa nefoni yangu.
Iyo inonakidza sevhisi inonzi Evercontact. Evercontact zvine hungwaru inoongorora yako inouya email uye auto-inosimbisa ruzivo rwekuonana mubhuku rako rekero uye CRM. Evercontact inotsigira Gmail, Google Apps, Outlook, uye Salesforce.
Zvakanakisisa pane zvese, iwe haufanire kuita chero chinhu - Evercontact inoongorora email yako iri kuuya yemasaini emaimeri kumashure uye otomatiki inogadziridza ruzivo rwehukama. Ivo vanotopa mushumo wezuva nezuva wekuchinja!
Tags: evercontactGmailgoogle appsmataridzikirosalesforcesynchronize vokukurukurakugadzirisa vokukurukura
Iwo Ekumusoro Ekushambadzira Tactics yeRinotungamira Zera
Mar 24, 2014 pa 7: 24 AM
Masiginecha haana kuvimbika sesosi yedata. Ini ndinokurudzira pachinzvimbo chekutonga mabatiro uchishandisa GlipMe, iyo inokwanisa kudyisa GMail uye chero smartphone ine yakagadziridzwa maitirwo.
Mar 24, 2014 pa 9: 49 AM
Ini handikwanise kuona masiginecha seasina kuvimbika data sosi.
Apr 8, 2014 pa 10: 46 AM
izvi ndizvo zvakataurwa neevercontact kubva mubhokisi retsamba rangu reGmail: “Nhau Dzakanaka shoma: Bummer! Hazviratidzike senge sisitimu yedu yawana chero maaitirwo ekugadzirisa iwe nhasi, asi munguva pfupi chokwadi. :)”
masiginicha anongori mavara asina kujeka mukufamba kwemavara…